Ukuwa kweengxilimbela, inoveli yembali kaKen Follett | Uncwadi lwangoku
Ukuwa kweengxilimbela -Ukuwa kweengxilimbela, ngesiNgesi - yinoveli yembali eyenziwe ngumbhali waseBritane uKen Follet. Le yinxalenye yokuqala ye Trilogy yenkulungwane, eyayiphakathi kwiMfazwe Enkulu, kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Yayingumxholo okhutshwe ngaxeshanye kumazwekazi amahlanu ngoSeptemba 2010, kusasazwa iikopi ezizigidi ezibini ezinesiqingatha.
Nangona abaninzi beyiphika, iphupha lombhali kukuba "lithengise kakhulu" kwaye kwangaxeshanye, lithathwe njengombhali "onzulu". Umdibaniso ongavumelekanga kwabaninzi, kodwa hayi uKen Follet. Kulungile nge Ukuwa kweengxilimbela ufeze umsebenzi ogqithisileyo, ohlelwe ngabagxeki abaninzi njengowona ubaluleke kakhulu kwiwaka leminyaka elitsha.
1 Malunga nombhali, uKen Follett
1.1 Amanyathelo okuqala kuncwadi
1.2 Iintsika zomhlaba
2 Ukuwa kweengxilimbela. Isahluko sokuqala setrilogy ekulindelwe kakhulu
2.1 Yinyani kunye nobuxoki
2.3 Incwadi eyoyikisayo
2.4 Kodwa ngeFollet kwenzeka okwahlukileyo
2.6 Njengoko isenza njalo?
Ukuba ngaba lukhona uluhlu olunengqondo olululo lwababhali abaphumeleleyo nabahlonelwayo benkulungwane yokugqibela, igama likaKen Follett livela phezulu, ngokungathandabuzekiyo. Uzalelwe eCardiff, eWales, ngo-1949, Wakhulela emva kwemfazwe (yesibini) eLondon, phakathi kosapho olunemithetho eyayithintela ukubukela umabonwakude okanye ukumamela unomathotholo. Indawo yakhe yokuphela: ukufunda.
Amanyathelo okuqala kuncwadi
UFollet wafunda ifilosofi, nangona waphela egxile kubuNtatheli. Ubungcali awazama ngabo ukuziphilisa, nangona kunjalo, isithukuthezi yayisisiphumo esingenakuphepheka. Ke, wakhetha ukubhala ... kwaye umdlalo wavela kakuhle kuye. Ngo-1978, wapapasha Isiqithi sesaqhwithiIncwadana yenoveli ebangel 'umdla ephawule ukungena okumangalisayo kwihlabathi lokupapasha.
Ngethuba lakhe lokuqala, wabhalisa igama lakhe phakathi "kwabona bathengisi babalaseleyo" kwaye wafumana ukubonwa kwakhe okokuqala: ibhaso likaEdgar. Njengokuthi "inqaku elongezelelweyo", lo mbhalo udweliswe njengenye yeeNoveli eziPhambili eziyimfihlakalo ngalo lonke ixesha, ngokwe Ababhali beMfihlakalo baseMelika.
Ngaphakathi kwincwadi ebanzi ebhalwe kwiFollet akukho msebenzi "unokuhlelwa" njengokungaphumeleli kurhwebo. Kuphumelele impumelelo enye emva kwenye. Nangona kunjalo, kukho isihloko esivelele phakathi kwabo: Iintsika zomhlaba (1989). Inoveli yembali ebekwe ngexesha elibizwa ngokuba yi "Anarchy yesiNgesi."
Ngaphandle kokumela ngokupheleleyo intsingiselo ye- Umthengisi ogqibelele, isicatshulwa sixatyiswa kakhulu kumanqanaba ngamanqanaba. Ngale ndlela, abayili bayayincoma inkcazo yezakhiwo zaseRoma, kunye nokuvela okuqhubekayo kwindlela yamaGothic. Ukuchaneka kwembali kuyabhiyozelwa, kunikwa iinkcukacha zemfazwe yamakhaya eyabakho eNgilane ngale minyaka.
Ukuwa kweengxilimbela. Isahluko sokuqala setrilogy ekulindelwe kakhulu
Ungayithenga le ncwadi apha: Ukuwa kweengxilimbela
Igama likaKen Follett sisiqinisekiso sempumelelo. Ngababhali abambalwa kakhulu, iinkampani zokupapasha zinobuganga bokusungula incwadi ngaxeshanye kwihlabathi liphela. Eyona nto yenzekileyo nge-28 kaSeptemba ka-2010 ngokukhutshwa kweevenkile zeencwadi ze Ukuwa kweengxilimbela, ufakelo lokuqala lwamabhongo Trilogy yenkulungwane.
Olu luhlu luqhubekile kunye Ubusika behlabathi (2012) kunye Umbundu kanaphakade (2014) yayikukuvalwa. Njengoko bekulindelekile, umsebenzi awuzange udanise. Izigidi zeekopi zithengisiwe, kunye nendumiso entsha yombhali ngobungangamsha bakhe kwiNoveli yeZembali. Kwibali-elingenakuphikiswa ngabafundi-oko kubandakanya ukungcatshwa, ubuhlobo kunye nothando olungenakwenzeka, kunye nenkohlakalo yemfazwe.
Yinyani kunye nobuxoki
Ukuwa kweengxilimbela Iqala ngokubekwa kukaGeorge V wase-United Kingdom. Umnyhadala owenzeka nge-22 kaJuni ngo-1911 eWestminster Abbey, eLondon. Ukusuka kweli nqanaba ukuya phambili, ubuxoki buxubana nenyani (iinyani zembali) kunye nokuqaqamba "kwendalo", eqhelekileyo yohlobo lweFollet.
Emva koko, abafundi bacinga ukuba ayinyani amava abalinganiswa abaphambili benoveli, kwimpembelelo egcinwe kuyo yonke trilogy. Abona baphambili "bokwenyani" embalini yiMfazwe yeHlabathi yokuQala kunye noHlaziyo lwaseRussia. Ngokunjalo, iyangena kwezi ziganeko zembali zilandelayo:
Uhlaselo lweSarajevo kunye nokuqhambuka kwangoko kwemfazwe (ngo-1914).
Ukubuyela kukaLenin ePetrograd (1917).
Ukumiselwa komThetho eMelika (1920).
Iintsapho ezintlanu, kwizizwe ezintlanu ezahlukeneyo, zakha iqhinga lazo Ukuwa kweengxilimbela. Kwinqanaba elincinci, kugxila kungxabano lwangaphakathi nganye nganye. Kwinqanaba le-macro, kugxilwe kwindlela umxholo oqala ngayo ukutshintsha imeko-bume yomhlaba. Onke amaqela amasebe athatha inxaxheba ngandlela ithile kwimbambano ephambili yemfazwe.
Ngokunjalo, zichazwe kunye nendlela ezinxulumene ngayo izizwe ezahlukeneyo (uthando, ukungcatsha, amaphupha kunye neminqweno, imiqobo). Ukongeza, amanye amanani embali avela, njengo-Sir Edward Grey, Umphathiswa Wezangaphandle kwi-Great Britain xa kwaqhambuka imfazwe. Kunye noWinston Churchill (oneminyaka eyi-40).
Ngokwenyani, uFollett "ngumbhali owoyikisayo." Uyenza kuba nge Ukuwa kweengxilimbela, umbhali uphinda "ifomula" eneziphumo ezaziwayo nezingqinelweyo ngaphambili: iincwadi ezibanzi, ezityebile ngeenkcukacha. Ukongeza, inani lezinto ngokusekwe kwiziganeko zembali kulula kakhulu ukungqinisisa.
Kwangelo xesha, isixa esikhulu sedatha yolandelelwano lubonelela abafundi ngeendlela ezintsha zokwandisa iinkalo zophando. Kwelinye icala, kule mihla incwadi enamaphepha angaphezu kwama-500 ibonakala inzima kakhulu. Ubudala beDijithali lixesha leetekisi ezihlanganisiweyo ezigqithileyo, enkosi, kwinxalenye enkulu, kubalinganiswa abali-140 (ngoku ngaphezulu kancinci) ebekwe yi-Twitter.
Kodwa ngeFollet kwenzeka okwahlukileyo
Njengoko kwenzekile kuninzi lwezihloko zombhali waseWales, Ukuwa kweengxilimbela idlula iimakhishithi ezili-1000. Kuphononongo lwe-amateur, inani labafundi abafuna okungaphezulu linomdla. Umbhali ngokwakhe wavuma kudliwanondlebe ukuba abantu abaninzi bambuza malunga neencwadi ezinde.
Eyona inomdla kuyo Ukuwa kweengxilimbela ngumdla wokufunda: awupheli nangaliphi na ixesha (ngaphandle kwento entsonkothileyo). Ukudibanisa ngokungakhethiyo kwaye ngaphandle kokwahlukana, ubuxoki kunye nenyani. Ukuhlala iyelenqe kwizinto onomdla kuzo (ezabalinganiswa bakho). Ngaphandle kokuyeka ubungqongqo bembali nangaliphi na ixesha.
Ubunzima obuchazwe kumhlathi owandulelayo ushwankathela ngokugqibeleleyo isitayile seFollett. Kananjalo, yiba ngumntu esidlangalaleni kwaye onempembelelo eNgilane, akazange azifihle ukuzazisa kwakhe kwiLabour Party kwaye ashiye iintshukumo. Nangona kunjalo, ubundlobongela bakhe bezopolitiko kunye nokusebenza kwakhe bekusoloko ngaphandle kweetekisi zakhe, Ukuwa kweengxilimbela Akunjalo.
Njengoko isenza njalo?
Mhlawumbi akukho mntu uya kumbona esidlangalaleni, kodwa uKen Follett uvusa umona phakathi koogxa bakhe bangoku. Uninzi lwazo aluyeki ukugqabaza ngokumangaliswa, indlela encomekayo ngayo impumelelo yencwadi enamaphepha angaphezulu kwewaka kubo. Kananjalo, bakufumanisa ukubawa kwabafundi kuyothusa, "kukuqwenga" naziphi na "iiBhayibhile" zalo mbhali.
Abanye (abanesibindi) abagxeki bade baligqibe eli bali ngokuthe ngqo, bezele ngabalinganiswa abalinganayo nabanokuxelwa kwangaphambili. Ewe, kubugcisa, isimanga sobunye - ngakumbi ukuba kulungile - siyamangalisa. Ngayiphi na imeko, akukho mntu unokuzama ukukhanyela i-dynamism kunye nomxholo wokuzonwabisa we Ukuwa kweengxilimbela. Indawo engaphezulu kweneleyo kubafundi abaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukuwa kweengxilimbela